Dijitalụ Ahịa Mgbanwe & Amụma maka 2014 | Martech Zone
Usoro Mgbasa Ozi Dijitalụ & Amụma maka 2014
Sunday, Jenụwarị 5, 2014 Douglas Karr
Aghọtara m na e nwere ụfọdụ ugboro ugboro ebe a ụfọdụ n'ime posts Anọ m na-ekere òkè na ebe m kwenyere na ndị na-ere ahịa kwesịrị ilekwasị anya ha n'afọ a… mana ozi infographic a na-achịkọta ya ma ọ dịkwa oke mma ịkekọrịta!
Afọ 2014 - ịzụ ahịa dijitalụ eruola ọkwa ọhụrụ ma na-aga n'ihu na-eme ya. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ere ahịa ka na-eche - “Olee ihe ndị ga-emetụta mbọ m na-agba n’ahịa n’afọ a na ruo ókè ha a ?aa? Enwere ịtụnanya ọ bụla na-eche? ” Si Position2 si infographic Usoro Mgbasa Ozi Dijitalụ & Amụma maka 2014.
Mobile, Ọdịnaya Ahịa, Email Marketing, Ahịa akpaaka na Social Media kwesịrị ịdị na ndepụta nke usoro onye ọ bụla iji lekwasị anya!
Tags: 2014usoro ahịa ọdịnayaemail ahịa na ọnọdụinfographicahia akpaaka na ọnọdụahia ahiausoro ekwentịỌnọdụ2Amụmausoro mgbasa ozi mmekọrịta